युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable स्थान के हुन् | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable स्थान के हुन्
रेल द्वारा यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका मध्ये एक हुन सक्छ नयाँ देश पत्ता लगाउन - आफ्नो गाडी मा आराम, हेर्दै को दृश्यहरु द्वारा रोल मा. तिनीहरूले पनि युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable स्थानहरू पुग्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हुनुहुन्छ!
यो यात्रा गर्न आउँदा, आफ्नो फोन सबै भन्दा निश्चित सबैतिर तपाईंले हो – फिल्टर र क्याप्शन प्रशस्त संग खेल्दै फोटो र भिडियो लिइरहेको देखि. आफ्नो यात्रा दस्तावेजीकरण, आफ्नो छुट्टी, शहर को आफ्नो अद्भुत सम्झनाहरु पकड ठूलो तरिका हो, देशहरूमा, र मार्फत आफ्नो मार्ग बनाउँदै गन्तव्यहरू. मात्र तपाईंले यी सम्झनाहरु सुरक्षित र भविष्यमा तिनीहरूलाई फिर्ता हेर्न सक्छन्, तर तपाईं पनि आफ्नो साथीहरु सँग यी क्षणमा साझेदारी गर्न इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
तर, जहाँ युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable ठाउँ हुन्? बाट Cady बकुल्लो को अमर शब्दहरू मा लोभी केटीहरु, यो Instagrammable अवसर संख्या आउँदा, सीमा अवस्थित छैन.
युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable स्थानहरू: को भेनिस Simplon-पूर्वी-एक्सप्रेस: लन्डन - भेनिस
हामी एक पत्थर दुई चरा यहाँ हत्या हुनुहुन्छ. यो केवल एक छ सबै भन्दा प्रसिद्ध रेल सेवा संसारको तर पनि युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable स्थानहरू छ. जबकि केही फरक मार्गहरू छन् तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा लोकप्रिय छ लन्डन भेनिस यात्रा गर्न. एक पटक तपाईं आफ्नो रेल भयो भेनिस, बचत एक ट्रेन को मद्दतले, आफ्नो विकल्प अनन्त छन्!
RIALTO ब्रिज (RIALTO ब्रिज)
The Rialto Bridge is one of only four bridges crossing the Venetian Grand Canal, जो यो मानिसहरूलाई बिना तस्वीर गर्न धेरै गाह्रो छ मतलब. एक विकल्प - यी सबै स्थानहरू रूपमा - बिहान धेरै प्रारम्भिक भ्रमण गर्न छ.
म कुनै महान् नहर को फोटो प्राप्त बिना शहर छोड्दा शङ्का. यो भेनिस बनाउँछ के, राम्रो, भेनिस! यो सबै भन्दा राम्रो दृश्य को एक Rialto पुल को शीर्ष छ.
युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable स्थानहरू: को Bernina एक्सप्रेस: स्विट्जरल्याण्ड - इटाली
मा Chur बीच यात्रा स्विट्जरल्याण्ड र Tirano मा इटाली, को 122km यात्रा शानदार स्विस मार्फत लिन्छ आल्प्स. इन्स्टाग्राम लागि पूर्ण!
एक पटक तपाईं स्विट्जरल्याण्ड आइपुगे गर्नुभएको, यहाँ सबैभन्दा Instagrammable ठाउँ हुन्:
THE TOBLERONE पहाड
यो पहाड परिचित देखिदैन? के तपाईं कहिल्यै Toblerone पट्टी खाएको गर्नुभएको छ भने, कि शायद किन हो! यो हो पनि पर्वत त्यो प्याकेजि on्गमा प्रदर्शित छ र यो यो युरोपमा सबै भन्दा बढि Instagrammable स्थानहरूको सूचीमा छ.
तल नै शट प्राप्त गर्न, जर्मेट सबै तरिका शीर्ष गर्न गर्नरग्राट रेल लिन, त्यसपछि चित्रमाला बिन्दु सम्म हिंड्न (विगतमा होटल).
सुझाव: जर्मेट मा सुपरमार्केट अक्सर यो सही शट लागि चालु Toblerone बारहरू बाहिर! त्यसैले तपाईंले यो शट चाहनुहुन्छ र त्यसपछि आफ्नो संभावना लिन बनाउन तपाईं जर्मेट प्राप्त गर्नु अघि तपाईंले यो किन्न निश्चित चाहँदैनन् भने.
तपाईं साहसिक लागि यहाँ हुनुहुन्छ भने (अर्थात्. प्याराग्लाइडिङ) त्यसपछि पक्कै तपाईंले केही महाकाव्य इन्स्टाग्राम शट तडक गरिनेछ. तपाईंको रक्तचाप बढ्दो जस्तै महसुस छैन? तपाईं कठिन Kulm को शीर्ष देखि एक सुन्दर शट प्राप्त गर्न सक्छन्. तपाईं इंटरलेकन को शहर र स्विस आल्प्स भन्दा एक अविश्वसनीय दृश्य प्राप्त.
युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable स्थानहरू: को Brocken रेलवे. Harz पहाड सीमा, जर्मनी
यस विशेष मार्गमा, तपाईं 1,142m-उच्च Brocken चढ्नु छौँ, उत्तरी मा उच्चतम शिखर जर्मनी, आनन्द लिई मनोरम दृश्य वरपरको परिदृश्य को. तर, तपाईं Harz पहाड भ्रमण गर्न मात्र जस्तै पहाड चढाइ छैन. वास्तबमा, तपाईं कहानी संग खेलौना सहर चाहनुहुन्छ भने यो राम्रो छ महल, यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु, गढीहरु, र मठहरु मध्य युग देखि, वा हेर्दै जंगली जनावरहरु को आफ्नो प्राकृतिक वासस्थान मा. तपाईँको इन्स्टाग्राम फिड लागि पूर्ण!
लिपजिग Wernigerode Brocken गाडिहरु गर्न
हानोवर Wernigerode Brocken गाडिहरु गर्न
म्यूनिख Wernigerode Brocken गाडिहरु गर्न
बर्लिन Wernigerode Brocken गाडिहरु गर्न
Collegiate चर्च यात्रा, महल, र क्वेडलिburg्गबर्गको ओल्ड टाउन
Grunderzeit र कला नोव्यू विला को संयोजन संग, Quedlinburg को पुरानो टाउन यो युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable स्थानहरूको एक बनाउँछ. यसलाई विश्वस्त कि काठ-फ्रेम भवनहरु को संख्या र उच्च गुणवत्ता हो यूनेस्को Quedlinburg एक मध्ययुगीन युरोपेली शहर एक असाधारण उदाहरण घोषणा गर्न.
लिपजिग Quedlinburg गाडिहरु गर्न
हानोवर Quedlinburg गाडिहरु गर्न
म्यूनिख Quedlinburg गाडिहरु गर्न
बर्लिन Quedlinburg गाडिहरु गर्न
पश्चिम हाइल्यान्ड रेखा: स्कटल्याण्ड
पश्चिम हाइल्यान्ड रेखा यात्रा, को Jacobite स्टीम ट्रेन शायद सबै भन्दा राम्रो यो मा खेल्छ भूमिका लागि जानिन्छ Harry Potter चलचित्र - यो Hogwarts एक्सप्रेस रूपमा. रेल पश्चिम हाइल्यान्ड रेलवे लाइन मा Mallaig देखि फोर्ट विलियम अलग भएको 84-माइल खण्डका चल्छ. यो अक्सर संसारमा सबैभन्दा ठूलो रेल यात्राको एक स्वराङ्कित गर्नुपर्छ, र इंसाफ से त!
तपाईं आफैलाई तडक हुन सक्छ pics केही मा एक नजर छ!
युरोप मा सबै भन्दा instagrammable स्थानहरू: पीत ट्रेन, फ्रान्स
हो भन्न '’ यो यात्रा गर्न! अधिक एक सताब्दी को लागि, यो मीटर-गेज पहेंलो रेल Latour-डे-क्यारोल गर्न Villefranche-डे-Conflent देखि फ्रान्सेली Pyrenées मार्फत आफ्नो बाटो घुमावदार गरिएको छ. यो दूरी मा के अभाव - यो केवल 63km र तीन घण्टा लामो - यो भन्दा बढी पूर्ण Instagrammable दृश्य मा बनाउँछ. को Parc Naturel क्षेत्रीय des Pyrenées Catalanes को नाटकीय पहाड तिनीहरूलाई को एक हुनुको!
यो पनि फ्रान्स गरेको उच्चतम रेलवे स्टेशन मा रुक, Bolquere-Eyne. समुद्र स्तर माथि 1592m मा जो बस्छन, र पोंट Gisclard पार, एक रेलवे झोलुङ्गे पुल.
कि फोन चार्ज र आफ्नो इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग अद्यावधिक. यो मद्दत एक टिकट बुक गर्न समय ATrain सेव र तडक प्राप्त!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-instagrammable-spots-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#फेसबुक #Mostinstagrammablespots europetrains europetravel इन्स्टाग्राम